DRC: markii qabiilka Kabila uu rabay inuu soo iibsado bangiyada Congolese - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA »DRC: markii qabiilka Kabila ay rabeen in ay iibsadaan bangiyada Congolese - JeuneAfrique.com
DRC: Markii qabiilka Kabila ay rabeen in ay iibsadaan bangiyada Congolese - JeuneAfrique.com
Qabiilkii hore ee madaxweynihii hore ee Congolese wuxuu isku dayey inuu kantaroolo bangiyada dhowr ah ee Congolese, oo udhexeeya 2013 iyo 2017, iyada oo gacan ka heleysey Angolan iyo Shiinaha. Kuwani waa natiijooyinka ka soo baxa warbixinta NGO-yada Mareykanka ee The Sentry, oo ay wadaagaan George Clooney.
"Kwanza Capital": Magaca Tani ma odhan doonaa wax Congo ugu. Laakiin sida laga soo xigtay The American NGO ilaaliye, co-aasaasay by actor George Clooney, shirkadani waa in ay xuddun u ah weerar by qabiil Kabila in ay qabsadaan dhowr bangiyada Congo, iyo inta u dhaxaysa 2013 2017, halka Kabila ahaa weli madaxweynaha DRC.
Warbixintu waxay of ilaaliye The, qoyska Kabila ugu horeysay isku dayeen in ay qabsadaan Banque ku commerciale du Congo (BCDC), mid ka mid ah bangiyada ugu wayn ee suuqa ee Kinshasa, ee ku qoran stock exchange Brussels iyo inta badan leedahay ganacsaduhu Belgian George Forrest. "Qoyska Kabila iyo xulafadooda uu, ka hawlgala dhex-dhexaadin ah, ayaa marka hore dalab si Forrest in 50 million in 2013 for saamiyada of qoyskiisa," ayuu qoray ilaaliye The.
Ganacsi: Soo kabashada weyn ee dhismaha ee Afrika - JeuneAfrique.com
Cameroon: Dawladdu waxay doonaysaa inay dayactirto laba qaybood oo tareenkeeda ah